Amasiko aseBolivia | Izindaba Zokuhamba
UMariela Carril | | Bolivia, Iziqondiso
Uma ungayazi iNingizimu Melika, mhlawumbe awazi ukuthi yini Bolivia Izwe eliqukethe izinto eziningi ngakho-ke akunakwenzeka ukusho ukuthi amasiko namasiko alo ahlukile. Eqinisweni, ahlukahlukene njengamaqembu ezizwe akha leli zwe elincane elicebile laseMelika.
Ukuxubana kwamaqembu ezenhlalo eBolivia kususelwe esikhathini seminyaka eyizinkulungwane esidlule saleli zwe kodwa nasefa lasekoloni laseSpain, ngakho-ke lapha okuncane kakhulu kwakho konke kuhlanganisiwe kunikeza isivakashi uthingo lwamasiko emangalisayo. Sazise ezinye zefayela le- amasiko aseBolivia.
2 Amasiko aseBolivia
KuseNingizimu Melika futhi igama layo elisemthethweni namuhla Isimo Sezwe LaseBolivia, kudwetshwa ngokunembile izinhlanga ezahlukahlukene eziyinhlanganisela. Inamadolobha amabili abaluleke kakhulu, ushukela (izimali zomlando nezomthethosisekelo), kanye La Paz (isihlalo sikahulumeni), nezilimi eziningana ezisemthethweni, isiQuechua, iSpanishi, isi-Aymara, isiGuaraní, phakathi kwezinye izilimi ezingama-33.
Kuhlalwa kuyo Abantu abayizigidi ze-10 nokwedlule kwayo kwakudala, indlalifa yamasiko amaTiwanaku, Moxeña noma amaInca, ngokwesibonelo, ngokuwela neSpanishi kuveze okuthakazelisayo ukungaziphathi kahle kwamasiko.
Abantu baseBolivia basemigqeni ejwayelekile enobungane kakhulu futhi enezihlobo ezisondelene kakhulu zomndeni. Yize inkolo yamaKhatholika inezimpande eziqinile, kusesejwayelekile ukuthi abantu abashadile bahlale ndawonye ngaphambi kokushada. Amanye amasiko obuKristu ayagcinwa futhi ayisizathu sokuhlangana nemikhosi ngokudla neziphuzo, okufana nemishado, ukubhabhadisa noma imingcwabo.
Ngokusobala amasiko ayahluka ngokuya ngesifunda sezwe nangokwezigaba zomphakathi, njengakuyo yonke indawo. Kumele kukhunjulwe ukuthi abaseSpain bagxila ekuxhashazweni kwezimayini zase-Oruro nasePotosí, ngakho-ke inyakatho, eningizimu nasempumalanga bacishe bashiywa, ngakho kulezi zingxenye zezwe kunamasiko omdabu amaningi futhi anemvelaphi engaphansi kweYurophu. Ngandlela thile, umqondo owakhelwe ngaphambili wokuthi umuntu unamasiko aseBolivia uhlobene nempilo yase-Andes, kepha eqinisweni kuningi kakhulu.
Enye yezinto engithanda ukuzenza kakhulu lapho ngihamba ukuzama indlela ye- ukudla kwasendaweni, ngakho-ke yikuphi ukudla okujwayelekile okukhona eBolivia? Empeleni, kufanelekile ukuthi kunezithako ezijwayelekile zendawo eziphindaphindwayo emazweni angomakhelwane: amazambane, Ngokwesibonelo, papa. Lesi tuber siyathandwa ezindaweni eziphakeme futhi uma sesiphelelwe amanzi emzimbeni saziwa ngegama le- i-chuño. I ummbila Kubuye kube yinto yakudala yize ukhohlwa yilowo omaziyo ngoba kunokuhlukahluka okuningi lapha.
Uzobona izitsha ngokususelwa ku- inkukhu, iwundlu, imvu noma inyama yenkomo, ilayisi futhi inkatho amasobho. Izindlela zokupheka ziyehluka kuye ngomuzi, idolobha nesifunda, kepha khumbula ukuthi akuwona wonke amazambane nommbila futhi kukhona izithelo zasezindaweni ezishisayo, imidumba, ubhontshisi wesoya kanye nemifino eminingi futhi. Mina uqobo ngiyathanda tamales, ngombila omhlophe osuswe ngebhotela, upelepele, inyama egayiwe no-anyanisi, kanye ne- humita ku chala, esongwe ngekhoba lommbila. Kuyajabulisa!
Eqinisweni, uma sikhuluma kabanzi, singakusho lokho e-tropical gastronomy ithonywa ngumakhelwane wayo iBrazil naseYurophu nase-Asia (ISanta Cruz ilapha), kunezitsha eziningi zokudla kwenyama ngoba yindawo yokuzalanisa izinkomo, futhi endaweni yase-Andes i-gastronomy ijwayele ukuba nezinongo kakhulu.
Kunezimakethe eziningi emadolobheni futhi uma ukudla emgwaqweni kungakwethusi, kuyizindawo ezinhle zokuzama ukunambitheka kwasendaweni. Uma kungenjalo, emadolobheni ungavakashela izindawo zokudlela yize kunjalo, akufani. Uma uku Santa Cruz Qaphela ukuthi Yindawo ethandwayo yenyama yayo. Abantu balapha bayayithanda i-grill, ngakho-ke uma uphuma uyohambahamba, hamba uhambe nge-Equipetrol noma izindlela zeMonseñor Rivero ngoba zombili zinemigoqo, izindawo zokudlela nezindawo zokudlela ezinhle. ELa Paz kwenzeka into efanayo endaweni eseningizimu noma ePrado noma eSan Miguel.
Mayelana amasiko omphakathi Abantu baseBolivia bavame ukukwenza ikhefu laphakathi nosuku. Akuhlali ngaphezu kwengxenye yehora futhi kubandakanya ukudla okuthile, a usawoti, njengoba besho lapha. Kuyindlela ye- empanada egcwele inyama, iqanda, iminqumo nemifino eziningana ukuthi kuyinto enkulu. Ntambama manje, ungaphuthelwa i-salteña. Futhi phakathi ntambama, kungcono ukuthi isikhathi setiyeUzobona futhi ukuthi abaningi bavame ukuhlala phansi baphuze itiye noma ikhofi.
Kukhona eziningi izitolo zekhofi noma amakamelo etiye, ikakhulukazi eLa Paz, eSanta Cruz noma eCochabamba. Ukudla kwakusihlwa, okwamanje, kuphakelwa phakathi kuka-8 no-9. Isimo sezulu saseBolivia sihlukahlukene ngakho-ke sithonya nokudla. Ezindaweni ezishisayo abantu badla u-ayisikhilimu nojusi omningi kanti netiye lesi-5, ngokwesibonelo, akuvamile.
Ngemuva kwemini sekuhlwile ngakho-ke izitolo eziningi ziyavalwa ngesinye isikhathi phakathi kuka-12 no-3 ntambama. Ilantshi yinde futhi kunabasebenzi ababuyela emakhaya bayodla isidlo sasemini nemindeni yabo, ngokwesibonelo, ikakhulukazi uma amabanga amafushane. Lokhu kuvamile ezingxenyeni eziningi zeLatin America futhi nenhlonipho iyafana ngakho uma usuvele wahambela kule ngxenye yomhlaba ngeke uhlangane nanoma yini exakile.
Umuntu waseBolivia uzoba nobungane kakhudlwana futhi abe nobungane nawe kuze kube sezingeni lokuthi azi wena isikhathi eside bese kuthi isimilo siphumule. Lapha awudli ngezandla zakho, ngaphandle kwento ejwayelekile yokuthi umuntu adle kanjena (ama-sandwich, ama-hamburger), usawoti udluliswa ngokuncika phezu kwawo etafuleni (kuyibhadi ukulidlulisa usuka esandleni kuye kwesinye), into ehloniphekile ukuwa nesipho uma Umema indlu, izimbali, ushokoledi, iwayini, futhi uma kukhona izingane okuthile kwazo kanye nalezo zinhlobo zemininingwane okwamanje esizibonayo emazweni amaningi.
I-etiquette iyahluka kancane kuye ngokuthi uya ekhaya lomndeni noma endaweni yokudlela nabangane noma isidlo sasemini sebhizinisi. Kuthiwa ngokujwayelekile abantu baseSanta Cruz bakhululeke kakhulu kulolu daba kunabantu basendaweni yaseAndes, ngokwesibonelo, kepha lokho akusho ukuthi ungadlalela emaflop.
Ekugcineni, Ingabe kukhona amasiko angajwayelekile eBolivia? Yebo. Izimoto zibusisiwe, Ngokwesibonelo. Umfundisi wamaKhatholika ubusisa izimoto nsuku zonke ngo-10 ekuseni eCopacabana, osebeni lweLake Titicaca emkhosini lapho iziqhumane notshwala kungasweli khona emotweni ngayinye. Elinye isiko lithi funda inhlanhla emaqabeni e-coca. Izingcingo yataris bafunda inhlanhla ngokujikijela amaqabunga e-coca emoyeni bese behumusha ikusasa ngokwendlela abawa ngayo.
Ngabe uya eBolivia ngoNovemba? Ngemuva kwalokho ungabamba iqhaza ephathini le- Lonke usuku lokufa. Ekuqaleni kwenyanga leyo, abantu base-Aymara bamazwe asentshonalanga bahlobisa izingebhezi zabantu, belangazelela imiphefumulo yabafileyo ukuba ibavikele futhi ibaphulukise. Uma ugebhezi luyisihlobo, kungcono, yize ukubanjwa inkunzi kwamathuna kubonakala kuwumkhuba wosuku ...
Ngomthambo ofanayo uma uthatha uhambo uzungeze okudumile Imakethe Yabathakathi BaseLa Paz Uzobona ama-llamas ezingane agcwele abantu abathenga ukungcwaba ezindlini zabo ezintsha becela ukwenzelwa uPachamama, uMama Wemvelo.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » América » Bolivia » Amasiko aseBolivia